N'ogbe Eventlọ Nzukọ Na-eme Ego 3x3m na Greenhouse | Winsom
40-99 Ibe 100-199 iberibe > = 200 iberibe
2) Igwe mgbochi mmiri na akwa akwa mkpuchi UV
3) Mbido na mfe idozi
Nọmba Model WS-F433
Aha ihe Mpụga Ihe omume Tlọikwuu 3x3m
Ihe mkpuchi 160gsm polyester
Frame spec. profaịlụ ụkwụ-25x25 / 20x20mm, tube truss-10x18mm, ọkpụrụkpụ tube-0.8mm
Ibu ibu 12kg
MOQ 40 iberibe
Ezigbo maka ọtụtụ ebe ọrụ dị, dị ka ihe ngosi, oriri, BBQ, ememme, ojiji azụmaahịa na ihe ndị ọzọ. Oke ala 10-x x 10 ụkwụ nwere nku ga-enye ngụkọta nke ụzọ mkpuchi dị kubit 100 maka ndị 8-12 - ezuru ezinaụlọ ahụ iji nwetakwa ndo na ndo!
Ngwurugwu ọkwa nchara siri ike kpuchie ntụ mgbochi ọcha na-egbochi.
Nwere ike ịtọ ụlọikwuu ngwa ngwa site na ịdọrọ eriri aka, nke ga-azọpụta gị oge. Ndị na-ere ahịa ndị ọzọ nwere ike jikọta ụdọ n ’akụkụ nkata ma dozie ya. Enwere ike idozi ngwaahịa anyị na eriri eriri n'akụkụ ọ bụla ma e wezụga nkuku anọ, ọkwa atọ nke ịdị elu a na-agbanwe agbanwe.
Igwe ahụ buru ibu nwere nkwụsi ike ka mma ma na-akwado ya, yabụ, anaghị emerụ ya na-agbanwe n'ụzọ na-adịghị mfe. Nzube zuru oke na ihe eji ewuli ego gi agha ga-egboro gi mkpa gi. Iji mee ka akụkụ akwa ahụ sikwuo ike, anyị na-anakwere oghere nchekwa plastik dị elu.
Isi nkuku niile gbara okpukpu abụọ. Eriri Velcro maka ijikọ aka ya na etiti. Isi ihe 4 nwoke. Iji eriri iji dozie kanopi na osisi nwere osisi. Enwere ike idozi ụdọ ndị na-aba ụba na ntanetị maka mbọ kwụkwuru.
Akpa tosh siri ike 600D, akwa siri ike na nke na -aghari. Nchekwa na mbufe di nfe. Site na obere akpa na nchekwa, ị nwere ike ịnụ ụtọ oge ma ọ bụ oriri gị n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Nke gara aga: Mpempe Mpụga Ọ Gazebo 3x3m
Osote: Gizebo Mpụga N’èzí na Akụkụ 3x6m
Profaili 40mm Heagba Ahụ Ike Na-arụ Mpempe Tlọikwuu ...